Kismaayo News » Weerarka Cabdi Qeybdiid waa waran laba af leh
Weerarka Cabdi Qeybdiid waa waran laba af leh
Kn: Weerar maanta loo gaystay guriga gudoomiyaha gudiga Dastuurka ee labada gole, Cabdi Cawaale Qeybdiid ayaa cidda ka danbaysay waxaa ka soo baxaya warar is khilaafsan.
Sida uu saxaafadda u cadeeyay Qeybdiid laftiisu, taliyeyaasha ciidanka iyo nabadsugidda oo la xiriiray waxay u cadeeyeen in ciidamada weeraray gurigiisa ay ahaayeen ciidamada Imaaraadku tabobaray isla mar ahaantaana wali ayaga ka amarqaata oo ku xaraysan isla xeradii lagu tabobaray. Laakiin war kaasi ka badalan waxaa saxaafadda u sheegay wasiirka warfaafinta dawladda federaalka, Eng. Yariisow kaasi oo ka dhawaajiyay inaysan dalka joogin ciidamo Soomaali ah oo dal kale ka amarqaata.
Hadalka Yariisow waa laba mid uun, in sida uu sheegayo aysan jirin ciidamo meelo kale ka amarqaata sidaasina ay ku noqonayso inay dawladdu weerarka loo gaystay Cabdi Qeybdiid ayadu ka danbaysay, markaana ay tahay inay masuuliyadda wixii meesha ka dhacay qaadato si lamid ah tii lagula kacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo in hadalka Yariisow uu yahay hadaltiro iyo cadowgaa dhuux sagaaro ayaa loogu subkadaa, sidaasi ay ku xaqiiqowdo hadalka Qeybdiid ee oranaya in ciidamo Imaaraadka ka amar qaata ay weerareen.
Marka laga tago hadalada iska hor imaanaya ee masuuliyiinta dawladda, waxaa xaqiiq ah inay jiraan ciidamo badan oo dalka ka hawlgala oo dalal shisheeye ay maamulaan, mana aha wax Shacabka Soomaaliyeed ka daahan ee waa wax ay ka dharagsanyihiin. Waxaa horay u jiray ciidamo Maraykanka iyo Ingriiska ka amarqaata oo ka hawlgalayay Muqdisho iyo gobollada dalka, waxaana ku soo biiray 4 sano ee ugu danbaysay ciidamo ka amarqaata Imaaraadka kuwaasi oo ka hawlgala Muqdisho.
Weerarka Cabdi Qeybdiid loo gaystay hadii ciidamada dawladdu ay fuliyeen oo madaxda dalku wax ka ogayd iyo hadii ciidamo dalal shisheeya ka amarqaata fuliyeenba waa ku ceeb iyo fadeexad, waxaana la rabaa in markan dawladdu si fiican isu saxdo oo isu hufto, hadii ay jiraan dalal hanaanka nabadda minjaxaabinayana waa in xiriirka loo jaraa dalkana laga eryaa. Hadii kale weerarka Cabdi Qeybdiid loo gaystay waxaa loo qaadanayaa waran laba af leh oo ciddii la doono loo galinaayo dhankii la doono.